काठमाडौँ उपत्यकामा सिटामोलको अभाव - Internet Khabar
Home News काठमाडौँ उपत्यकामा सिटामोलको अभाव
काठमाडौँ, जेठ २९ गते । काठमाडौँ उपत्यकाकै बजारमा केही दिनदेखि सिटामोलको अभाव हुन थालेको छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै सिटामोलको माग बढेपछि अभाव सुरु भएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिले बजारमा दुई कारणले सिटामोल अभाव भएको छ । एक भारतमा महँगो मूल्य पाइने भएकाले निर्यात गरिएको छ। अर्को भएको सिटामोल लुकाएर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ । ”
नेपाल औषधि उत्पादन सङ्घका महासचिव विमल अधिकारीले सिटामोलको उत्पादनमा कुनै कमी छैन तैपनि बजारमा अभाव देख्दा आफूलाई आश्चर्य लागेको बताउनुभयो ।
सिटामोलको भाउ बढ्नुका तीन कारण रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो बजारमा उच्च माग, दोस्रो औषधि वितरकबाट भारतमा महँगोमा बिक्री, तेस्रो सिटामोलको कच्चा पदार्थको पनि अभाव हुन थालेको छ । ती सबैको असर अहिले बजारमा देखिएको छ । ”
उहाँले भन्नुभयो, “औषधि उत्पादनमा कुनै कमी अहिलेसम्म भएको छैन । पछिल्लो एक महिनाको बीचमा मात्रै डेढ करोड ट्याब्लेट सिटामोल उत्पादन गरेर बजारमा पठाएका छौँ । आज मात्रै ६२ लाख ट्याब्लेट बजारमा गएको छ । ”
“बजारमा औषधि निर्बाध गइरहेको छ तर पनि बजारमा छैन किन ? यसबारेमा सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराइसकेका छौँ, कहाँ गएको छ त्यो सरकारका जिम्मेवार निकायले खोज्नुप¥यो नि,” महासचिव अधिकारीले भन्नुभयो । यस विषयमा सबैको ध्यानाकर्षण भइसकेकाले अर्को साता अभावको अवस्था नआउने उहाँको भनाइ छ ।
त्यसो त यतिबेला भारतीय बजारमा भन्दा नेपाली बजारमा सिटामोलको मूल्य कम छ । नेपालमा एक रुपियाँ पर्ने सिटामोल भारतीय बजारमा भारतीय लगभग दुई रुपियाँ पर्न जान्छ । खुला सीमाका कारण नेपाली बजारमा खरिद गरेर भारतमा बेच्ने गिरोह सक्रिय हुँदा पनि नेपालमा उत्पादित सिटामोल व्यवसायीसम्म पुग्न नसकेको हुनसक्ने उद्योगीको आशङ्का छ ।
उत्पादकहरूले नेपालमा उत्पादन हुने ५० प्रकारका औषधिको मूल्यमा १४ वर्षदेखि समायोजन नभएको भन्दै उत्पादन ठप्प पार्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । यससँगै भोलिका दिनमा भने अभाव चुलिने सम्भावना बढेर गएको हो ।
विभागका प्रवक्ता डा. सन्तोष केसीले बजारमा सिटामोल अभावको हल्ला चलेकाले उत्पादक उद्योगीसँग मौज्दातको अवस्था बुझ्न थालिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
Previous articleसङ्क्रमितमा तनावको समस्या
Next articleनिषेधाज्ञा थपिने तर ‘मोडालिटी’ भने परिवर्तन हुने